किन आउँछ अनुहारमा चाया–पोतो? जान्नुहोस् हटाउने उपाय - Everest Dainik - News from Nepal
किन आउँछ अनुहारमा चाया–पोतो? जान्नुहोस् हटाउने उपाय
काठमाडौं, जेठ ९ । चाया पोतोले हैरान बनाएको छ? हैरान बनाए पनि तनाव भने लिनु हुन्न । तनावले त झन् चाया पोतोको समस्या अझ बढ्छ । छालाको समस्या लिएर स्वास्थ्य जाँच गर्न पुग्नेमध्ये ९० प्रतिशत महिला र १० प्रतिशत पुरुष हुन्छन् । चायापातो विशेषगरी अनुहारमा आउँछ । अनुहारमा आउने चायापोतो नाक, गाला, आँखीभौँमाथि, निधार जस्ता ठाउँमा आउँछ । जसले अनुहार नै कुरुप बनाइदिन्छ ।
याे पनि पढ्नुस हातखुट्टा मर्किदा यी उपायहरु जानिराखौं
छालामा कालो रंग बनाउने कोषिका हुन्छन् । जसलाई मेलानोसाइट्स भनिन्छ । यी कोषिका बढी सक्रिय हुँदा आउने परिवर्तन नै चायापातो हो । मेलानोसाइटको घनत्व शरीरको अन्य भागमा भन्दा अनुहारमा बढी हुने भएकाले अनुहारमा बढी यसको असर पर्ने सभिल अस्पतालका छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डा.रवीन्द्र शर्माले बताए ।
याे पनि पढ्नुस सुत्केरीका लागि स्वास्थ्य संस्थामा जानेक्रम बढ्दो
६ महिनादेखि एक वर्षसम्म सन ब्लक क्रिम प्रयोग गर्दा पनि चाया पोतो नहटे थप उपचार गर्नुपर्ने शर्मा बताउँछन् । केमिकल पिल्सले छालाको बोक्रा निकालेर सफा गरिन्छ । बोक्रा गएपछि सफा किसिमको भित्री छाला आउन मद्दत गर्छ । र, चायापोतो हट्छ । यो जानकारी शुक्रबार साप्ताहिकबाट लिइएको हो ।
ट्याग्स: health care